Maxaad kala socota shaqsiyadda la-taliyaha ammaanka Qaranka ee madaxweyne Farmaajo..? – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxaad kala socota shaqsiyadda la-taliyaha ammaanka Qaranka ee madaxweyne Farmaajo..?
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa 16-kii Feberaayo ee sanadkaan magacaabay xilal kala duwan, waxaana dadka xilalka loo magacaabay ku jiray la-taliyaha amniga Qaranka Xuseen Macalin Maxamuud Sheekh Cali.
Seddaxdii sano ee ugu dambeysey Xuseen waxaa uu ahaa la-taliyaha sare ee amniga oo uu weliba si gaar ah ugu qaabilsanaa dhanka ka-hortaga argagaxisada ee dowladdii hore.
Waxuuna xubin ka ahaa golaha amniga Qaranka oo ah hay’adda ugu sareeysa dalka ee go’aan gaariska arrimaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya oo uu weliba la bilaabay markii la hirgeliyey golaha amniga Qaranka.
Xuseen waa shaqsi si istraatejiyad leh u fikira, waxuuna qoray Istraatejiyada La dagaallanka Argagaxisada ee Dowladda Federaalka Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu qoray Istraatejiyadda iyo siyaasada dalka ee dib-u-heshiisiinta iyo cafiska loo fidiyo Al-Shabaab.
Xuseen wuxuu hormuud ka ahaa abuurista Xarunta Warbixinta Maaliyadda (Financial Reporting Center “FRC”).
Howlaha uu qaabilsanaa waxaa ka mid ahaa La-dagaallanka Argagaxisada, La dagaallanka Burcad-badeeda, Lid-xuuraanka iyo xiriirka hay’adaha caalamiga ee ka howlgala Soomaaliya, waxuuna mar noqday Ku-xigeenka Agaasimaha Guud ee Hay’ada Nabadsugida & Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed.
Xuseen waa 47 sano jir heysta shahaadada Bachelor ee taariikhda iyo shahaadada Master-ka ee arrimaha amniga iyo sirdoonka.
Sidoo kale, wuxuu la-taliye u ahaa guddiga amniga Qaranka ee dowladii Xasan Sheekh Maxamuud oo isla xilka hadda loo magacaabay uu haayay.